Fifandraisana: fanalefahana ny filan'ny nofo | Reward Foundation
Home fifandraisana Manimba ny faniriana hanao firaisana
Ny fanilihana ny filan'ny nofo dia tena olana amin'ny fifandraisana maharitra. Izy io dia vokatry ny famokarana dopamine kely kokoa mandritra ny fihaonana ara-nofo amin'ny vady mitovy. Mandritra izany fotoana izany ny atidoha dia mampihena ny isan'ny mpandray azy amin'ny dopamine rehefa mandeha ny fotoana mba hanodinana ny vokatry ny valisoa entin'io olona io Dopamine no neurochemical izay mitarika faniriana sy antony manosika. Miroborobo amin'ny zava-baovao izy io. Rehefa tapitra ny 'neurochemicals honeymoon' dia afaka mahatsapa ho tsy misy na tsy misy filan'ny nofo na faniriana ho an'ny sakaizantsika isika. Mety hifantoka amin'ny fananganana asa na fitaizana zaza isika. Tsy midika izany hoe tsy mahatsapa fitiavana na mifamatotra amin'ny vadintsika isika, fa ny filan'ny nofo fotsiny dia kely noho ny tamin'ireny andro ireny.
Izany fahatsapana fahasosorana izany dia mety hanosika ny olona sasany hitady fotoana hanaovana firaisana vaovao miaraka amin'ireo mpiara-miasa vonona, virtoaly na tena izy. Androany ny famitahana ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia manimba eo amin'ny fifandraisana maro. Ny Coolidge Effect no antony mahatonga ny pôrnôgrafia, fa ny pôrnôgrafia amin'ny Internet indrindra, manintona tokoa. Misy onja tsy tapaka sy vady toa an-tsitrapo miseho ho azontsika, amin'ny swipe, kitiho na paompy. Raha tsy misy ny Coolidge Effect dia tsy hisy pôrnôn'ny Internet. Ny atidoha limbic primitive dia tsy afaka milaza ny mahasamihafa ny tena vady sy ny kinova virtoaly 2-refy, virtoaly eo amin'ny efijery.
Mba hanampiana ny famelomana indray ny taratra, ny fifanakalozana fitondran-tena mifamatotra dia tena soso-kevitra. Ireo dia famantarana tsy fahatsiarovan-tena amin'ny ati-doha limbic izay manampy amin'ny fampitoniana ny fahatsapana fisarahana na lolom-po. Jereo fa mahasoa ity lahatsoratra ho an'ny antsipiriany bebe kokoa. Iray amin'ireo boky tsara indrindra eny an-tsena izay tsy vitan'ny hoe mamaritra ny siansa sy ny saina fotsiny izay manohana an'io tranga io fa manana torolàlana tsikelikely hanasitranana azy koa. Zana-tsondro misy poizina an'i Cupid- Avy amin'ny fahazarana mankany amin'ny fihavanana amin'ny firaisana ara-nofo, nataon'i Marnia Robinson. Izay mety ho hita Eto. Jereo koa ity podcast ity ho an'ny topy maso fohy ny lohahevitra miaraka amin'ny mpanoratra.
<< Ny vokany Coolidge Firaisana ara-nofo sy sary vetaveta >>